श्वेतालाई करिष्माको शुभकामना- कहिलेकाही भावनालाई पैतालामुनि कुल्चिनुपर्छ ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारश्वेतालाई करिष्माको शुभकामना- कहिलेकाही भावनालाई पैतालामुनि कुल्चिनुपर्छ !
December 9, 2020 admin समाचार 3730
नायिका करिश्मा मानन्धरले सोमबार विवाह बन्धनमा बाँधिएकी नायिका श्वेता खड्कालाई वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिएकी छिन् । नायिका मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमा एक भावुक सन्देश लेख्दै शुभकामना दिएकी हुन् ।
‘तिम्रो हिजोको स्टाट्स लेखाइमा भयेको तिम्रा भाव बुझे जस्तो लागेर यी शब्दहरु लेख्दैछु,’ करिष्माले शुभकामना दिँदै लेखेकी छिन्, ‘नवीन वैवाहिक जीवनको शुभकामना श्वेता । तिमी वास्तविक जीवनको नायिका हौ ।
April 26, 2021 admin समाचार 2078
December 28, 2020 admin समाचार 2323
December 31, 2020 admin समाचार 1989